Bradycardia (နှလုံးခုန်နှေးခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Bradycardia (နှလုံးခုန်နှေးခြင်း)
Bradycardia (နှလုံးခုန်နှေးခြင်း) ကဘာလဲ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင် နှလုံးခုန်နှုန်း တစ်မိနစ်လျှင် (BPM) ၆၀ အောက် ရောက်နေပါက နှလုံးခုန်နှေးခြင်း (Bradycardia) ဟုခေါ်သည်။ နှလုံးခုန်နှုန်းသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ နားနေချိန်တွင် ၆၀ နှင့် ၁၀၀ ကြားရှိပါသည်။ နှလုံးခုန်နှေးခြင်းသည့် ပုံမှန်ကျန်းမာသူလဲဖြစ်နိုင်သည်။
ဥပမာ – ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားရသော အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင် နားနေချိန်၌ 60 BPM ရှိနိုင်ပြီး ၎င်းသည် ပြဿနာမဟုတ်ပါ။
နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်နေသည့်အခါတွင်လဲ 60 BPM အောက် ရောက်နိုင်သည်။
အရွယ်ကြီးရင့်သူများတွင် နှလုံးခုန်နှေးပါက ပြဿနာ ပိုဖြစ်နိုင်ပါသည်။
သို့သော် နှလုံးခုန်နှေးခြင်းသည် နှလုံးလျှပ်စစ်စနစ်၌ ပြဿနာရှိနေခြင်းလဲ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Bradycardia (နှလုံးခုန်နှေးခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
နှလုံးခုန်နှေးခြင်းသည် အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်သည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်သောအချက်အလက်များကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါသည်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။
Bradycardia (နှလုံးခုန်နှေးခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
နှလုံးခုန်နှေးခြင်း ၏ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာများမှာ –
မူးမေ့လဲတော့မလို သို့ မူးမေ့လဲခြင်း (Syncope)
ကယောင်ကတမ်းဖြစ်ခြင်း သို့ မှတ်ဉာဏ်ပြဿနာဖြစ်ခြင်း
သင့်ဆီမှာ အထက်ဖော်ပြပါ ရောဂါလက္ခဏာတွေထဲမှ တစ်ခုခုများရှိနေမယ်ဆိုလျှင် သို့မဟုတ် မေးခွန်းတစ်ခုခုရှိနေမယ်ဆိုလျှင် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ လူတိုင်း၏ခန္ဓါကိုယ်တုံ့ပြန်မှုသည် မတူညီနိုင်ပါ။
မူးမေ့လဲလျှင်၊ အသက်ရှူရခက်လျှင် သို့မဟုတ် မိနစ်အနည်းငယ်ထက် ပိုကြာအောင် ရင်ဘတ်အောင့်လျှင် ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းခေါ်ပါ။
Bradycardia (နှလုံးခုန်နှေးခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
နှလုံးရောဂါ သို့ နှလုံးဖောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော နှလုံးတစ်ရှူးပျက်ခြင်း
နှလုံးတစ်ရှူးများ ကူးစက်ပိုးဝင်ခြင်း (Myocarditis – နှလုံးကြွက်သားများရောင်ခြင်း)
သိုင်းရွိုက်ဂလင်း အလုပ်နည်းခြင်း (hypothyroidism)
နှလုံးလျှပ်စစ်လှုံစော်မှုရစေရန် လိုအပ်သည့် သတ္တုဓါတ်များနှင့် ဆက်နွယ်သော ပစ္စည်းများ မညီမျှခြင်း (electrolytes)
အိပ်ပျော်နေစဉ် ခဏခဏ အသက်ရှူရပ်ခြင်း (Obstructive sleep apnea)
လေးဖက်နာကြောင့်ဖျားခြင်း သို့ lupus တို့ကဲ့သို့ ရောင်ရမ်းမှုဖြစ်သောရောဂါများ
အင်္ဂါများတွင် သံဓါတ်များ စုပုံခြင်း (hemochromatosis)
နှလုံးစည်းချက်မမှန်ခြင်းအတွက်သုံးသောဆေးများ၊ သွေးတိုးကျဆေးများ စိတ်ရောဂါဆေးများ
Bradycardia (နှလုံးခုန်နှေးခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
နှလုံးခုန်နှေးခြင်း ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေသော အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်
အသက်အရွယ် – နှလုံးခုန်နှေးခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းရင်းသည် အသက်အရွယ်ဖြစ်သည်။ နှလုံးခုန်နှေးခြင်းနှင့် ဆက်နွှယ်သော နှလုံးရောဂါများမှာ အသက်ကြီးရင့်သူများတွင် ပိုတွေ့ရ၏။
နှလုံးခုန်နှေးခြင်း သည် တစ်ချို့နှလုံးရောဂါများကြောင့် နှလုံးတစ်ရှူးများပျက်စီးခြင်းနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ထို့ကြောင့် နှလုံးရောဂါများဖြစ်စေသော အန္တရာယ်အချက်အလက်များမြင့်မားနေလျှင် နှလုံးခုန်နှေးခြင်းဖြစ်နိုင်ချေလဲ များမည်ဖြစ်သည်။
လူနေမှုနေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးကုသမှုခံယူမှုသည် အောက်အချက်များနှင့် ဆိုင်သော နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကို လျော့ချပေးနိုင်ပါသည်။
စိတ်ပိုင်ဆိုင်ရာဖိစီးမှု သို့မဟုတ် စိုးရိမ်စိတ်များခြင်း
Bradycardia (နှလုံးခုန်နှေးခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သင့်အခြေအနေအား ရောဂါအမည်တပ်နိုင်ရန် ဆရာဝန်မှ သင်၏ရောဂါလက္ခဏာများ၊ ရောဂါရာဇဝင် နှင့် မိသားစုရာဇဝင်တို့အား မေးမြန်းကာ စမ်းသပ်ကြည့်ရှူပေးပါလိမ့်မည်။
သင့်ဆရာဝန်မှ သင့်နှလုံးခုန်နှုန်းကို တိုင်းတာသည့် စစ်ဆေးမှုအမျိုးမျိုးအားလုပ်ပြီး နှလုံးခုန်နှေးခြင်းနှင့် သင့်ရောဂါလက္ခဏာများကို ဆက်စပ်ပြီး နှလုံးခုန်နှေးခြင်းကိုဖြစ်စေသည့် အခြေအနေကို တွက်ထုတ်ပါလိမ့်မည်။
အီးစီဂျီဆွဲခြင်း – အီးစီဂျင်သည် နှလုံးခုန်နှေးခြင်းကို တွက်ချက်နိုင်သော မူလစစ်ဆေးချက်ဖြစ်ပါသည်။ အီးစီဂျီးတွင် သေးငယ်သောအာရုံခံပစ္စည်းများ (electrodes) အား ရင်ဘတ်နှင့် လက်မောင်းတွင် ကပ်ကာ နှလုံးကိုဖြတ်စီးဆင်းသော လျှပ်စစ် အမှတ်အသားများကို မှတ်ယူပါသည်။
သင့်ဆရာဝန်မှ ထိုအမှတ်အသားများ၏ပုံစံကိုကြည့်ကာ ဘယ်လို နှလုံးခုန်နှေးခြင်းအမျိုးအစားလဲဆိုသည်ကို ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မည်။ နှလုံးခုန်နှေးခြင်းသည် မကြာခဏ ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ဆရာဝန်ဆေးခန်းတွင်ဆွဲသော စံစနစ်အီးစီးဂျီတွင် တွေ့နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အီးစီဂျီစစ်နေစဉ် ဖြစ်နေမှသာ နှလုံးခုန်နှေးခြင်းကို သတ်မှတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် သင့်ဆရာဝန်သည် သယ်ယူရလွယ်သည့် အီးစီဂျီစက်အား တပ်ဆင်ပေးပြီး အိမ်သို့ပြန်ခိုင်းနိုင်ပါသည်။ သို့မှသာ သင့်နှလုံးခုန်နှုန်းအကြောင်း သိရပြီး နှလုံးခုန်နှေးခြင်းနှင့် လက္ခဏာများပေါ်လာခြင်းတို့ ဆက်စပ်မှုအကြောင်း သိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုစက်များတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်။
Holter monitor – သယ်ရလွယ်သော အီးစီဂျီစက်သည် အိပ်ကပ်ထဲ ခါးပတ်ထဲ ပုခုံးအိတ်ထဲ ထည့်သယ်ယူနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ၂၄ နာရီပတ်လုံး သင့်နှလုံးခုန်နှုန်းကိုမှတ်ယူထားနိုင်သောကြောင့် သင့်နှလုံးစည်းချက်ကို ဆရာဝန်မှ ကောင်းကောင်းစစ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ထို ၂၄ နာရီအတွက် ဒိုင်ယာရီရေးရန် ဆရာဝန်မှ ပြောထားပါလိမ့်မည်။ သင်ခံစားရသည့်လက္ခဏာများနှင့် အချိန်ကို တိတိကျကျ ရေးထားရမည်ဖြစ်သည်။
Event Recoder – ဒီလို သယ်ရလွယ်သော အီးစီဂျီစက်သည် ရက်သတ္တပတ်အနည်းအတွင်း သို့ လအနည်းငယ်အတွင်း သင့်နှလုံးလှုပ်ရှားမှုအခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ရန် စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
နှလုံးခုန်နှေးခြင်းနှင့်ဆိုင်သော လက္ခဏများ ဖြစ်လာပြီးဆိုမှ စက်ကိုဖွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။ လက္ခဏာများကို ခံစားရသည်နှင့် ခလုတ်နှိပ်ကာ အီးစီဂျီကိုမိနစ်အနည်းငယ်ကြာအောင် ဆွဲရပြီးနောက်မှ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာအောင် မှတ်ထားရ၏။ ၎င်းသည် ရောဂါလက္ခဏာပြသည့်အခါ ရှိနေမည့် နှလုံးစည်းချက်ကို စစ်ဆေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
နှလုံးခုန်နှေးခြင်းခြင်းကို ဘာကဖြစ်စေတာလဲဆိုတာ သိနိုင်ရန်အတွက် သင့်အား အီးစီးဂျီစက်နှင့်စောင့်ကြည့်နေစဉ် ဆရာဝန်မှ တခြားစစ်ဆေးမှုများကို လုပ်ပါလိမ့်မည်။ ထိုစစ်ဆေးမှုများတွင် အောက်ပါတို့ပါသည်။
Tilt Table Test – ဒီစစ်ဆေးမှုသည် မူးမေ့လဲရခြင်းနှင့် နှလုံးခုန်နှေးခြင်း ဆက်စပ်မှုကို နားလည်စေရန် ဆရာဝန်အား အကူအညီပေးသည်။ သင်သည် အထူးပြုထားသည့် စားပွဲပေါ်တွင် လဲနေရမည်ဖြစ်ပြီး စားပွဲမှ မတ်တပ်ရပ်သည့်အနေအထားသို့ အလိုလိုပြောင်းသွားပါလိမ့်မည်။ အနေအထားပြောင်းခြင်းဖြင့် မူးမေ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ဆရာဝန်မှ နှလုံးခုန်နှေးခြင်းနှင့် မူးမေ့လဲခြင်းကို ဆက်စပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
လေ့ကျင့်ခန်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်း – လမ်းလျှောက်စက်ပေါ် သင်လမ်းလျှောက်စဉ် သို့ စက်ဘီးနင်းစက်တွင် နင်းနေစဉ်၌ ဆရာဝန်မှ သင့်နှလုံးခုန်နှုန်းကို စောင့်ကြည့်နေပြီး လှုပ်ရှားမှုနှင့်သင့်တော်သော တုန့်ပြန်မှုရှိမရှိ ကြည့်ပါလိမ့်မည်။
သင့်ဆရာဝန်မှ နှလုံးခုန်နှေးခြင်းကိုဖြစ်စေသော တခြားအကြောင်းများ ဥပမာ ကူးစက်ပိုးဝင်ခြင်း၊ သိုင်းရွိက်အလုပ်နည်းခြင်း သို့ လျှပ်ကူးသတ္တုဓါတ်များ မညီမျှခြင်းတို့ရှိမရှိသိနိုင်ရန် သွေးစစ်ခိုင်းနိုင်ပါသည်။
Bradycardia (နှလုံးခုန်နှေးခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
နှလုံးခုန်နှေးခြင်းအား ကုသမှုသည် လျှပ်ကူးစနစ်ပြဿနာ၊ လက္ခဏာများပြင်းထန်မှုနှင့် နှလုံးခုန်နှေးခြင်းကိုဖြစ်စေသည့်အကြောင်းရင်း စသည်တို့အပေါ်မူတည်ပါသည်။
အောက်ခံနဂိုရောဂါများအား ကုသခြင်း – အောက်ခံရောဂါရှိလျှင် ဥပမာ သိုင်းရွိက်အလုပ်နည်းခြင်း သို့မဟုတ် အိပ်ပျော်နေစဉ်အသက်ရှူရပ်ခြင်းတို့ကြောင့် နှလုံးခုန်နှေးခြင်းဖြစ်လျှင် နှလုံးခုန်နှေးခြင်းပျောက်ကင်းစေရန် အောက်ခံရောဂါကိုကုမှ ဖြစ်မည်။
နှလုံးကုသရေးဆေးများအပါအဝင် ဆေးတော်တော်များများသည် နှလုံးခုန်နှေးခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ သင်သုံးနေသည့်ဆေးများကို ဆရာဝန်မှစစ်ဆေးပြီး ပြောင်းလဲရန်လမ်းညွှန်နိုင်ပါသည်။ ဆေးပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးပမာဏလျော့ခြင်းတို့ဖြင့် နှလုံးခုန်နှေးခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါသည်။
Pacemaker ဆိုသည်မှာ ဘက်ထရီနှင့်သုံးသော ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး သင့်ညှပ်ရိုးအောက်တွင မြှုပ်ထားရသည်။ ထိုစက်မှ ဝိုင်ယာများအား သွေးပြန်ကြောများမှတစ်ဆင့် နှလုံးဆီသို့ သွယ်တန်းရသည်ဖြစ်သည်။
ဝိုင်းယာအစွန်မှ လျှပ်ခေါင်းများက နှလုံးတစ်ရှူးများတွင် တွယ်ကပ်ထားရသည်။ Pacemaker မှ နှလုံးခုန်နှုန်းပုံမှန်ဖြစ်နေစေရန် နှလုံးခုန်နှုန်းကိုစောင့်ကြည့်ကာ လျှပ်စစ်လှုံစော်မှုကို ပြုလုပ်ပေးပါသည်။
Pacemaker အများစုသည် သင့်နှလုံးကိုစောင့်ကြည့်ထားသည့်အချက်များကို နှလုံးအထူးကုမှအသုံးပြုနိုင်ရန် မှတ်တမ်းတင်ပေးနိုင်သည်။ သင့်နှလုံးနှင့် သင့် Pacemaker အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်မလုပ်သိစေရန် မှန်မှန်ချိန်ဆိုသည့်အခါတိုင်း ပြန်ပြရပါမည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက နှလုံးခုန်နှေးခြင်း ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနှင့်အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် နှလုံးခုန်နှေးခြင်း ကိုကုသတဲ့နေရာနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေသောနေရာများတွင် အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။
နှလုံးကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွှတ်သည်များစားရန် အစီအစဉ်ဆွဲပါ။ ထိုအစားအစာများတွင် သစ်သီးများ၊ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ဂျုံကြမ်း၊ ငါးနှင့် အဆီနည်းသောအစာများ သို့ အဆီမပါသောအစာများပါဝင်ပါသည်။ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေပါ။ အချိန်တိုင်းမဟုတ်တောင် တစ်ပတ်လျှင်ရက်အတော်များများ လှုပ်ရှားနေပါ။ သင့်နှင့်သင့်တော်သော လေ့ကျင့်ခန်းများကို ဆရာဝန်မှ အကြံပြုနိုင်ပါသည်။
တခြားရောဂါများဖြစ်သော သွေးတိုးသို့ သွေးတွင်းအဆီများခြင်းတို့ကိုစီမံပါ။
Bradycardia (Slow Heart Rate) - Topic Overview. http://www.webmd.com/heart-disease/tc/bradycardia-slow-heart-rate-overview#1. Accessed Oct 10, 2016
Bradycardia. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/bradycardia/basics/definition/con-20028373. Accessed Oct 10, 2016
Slow Heartbeat. http://www.hrsonline.org/Patient-Resources/Symptoms-Diagnosis/Slow-Heartbeat. Accessed Oct 10, 2016